Inombolo yomnxeba: +86 769-82036868
Con Digital Con Digital Con Digital Digital Con Con Con Con Con Con Con Con Con Con
Isixhobo sesilumkiso se-Mechanical Convection
Konwabele ukubhaka kwakho ngeOven Convection
I-oveni yokubonelela yamkela isitya seglasi iFrecnch, ethi ingenise ngokuthe ngqo kwiFrech, i-360-degree degree panoramic yokutya okuphekiweyo, wonwabe kukubhaka! Uhlala uxakeke kangangokuba awunaxesha lokupheka. Ngaba uyafuna ukonwabela ukonwaba kokupheka ekhaya wedwa? Haha, ihlala iphela nge-ev ...
Imveliso entsha-yeSoda yaManzi yaMiselwa
Imveliso eNtsha — Umthengisi weeSoda oSunguliweyo Njengoko sisazi sonke, kwilizwe, inzululwazi nobuchwephesha zezona zinto zingamandla okuvelisa, kwaye inzululwazi nobuchwephesha buhlaziya ilizwe; nakumzi-mveliso, amandla e-R & D kunye namandla okuyila asondele kakhulu kwisantya kunye ne-q ...
SHANGHAI AQUATECH CHINA JUNI 2nd - JUNI 4 2021
I-Aquatech China ngowona mboniso mkhulu kurhwebo lwamanzi lwamazwe aphesheya e-China kwimimandla yenkqubo, ukusela kunye namanzi amdaka. Umboniso usebenza njengendawo yokuhlangana yazo zonke iinkokheli zentengiso kwicandelo lamanzi laseAsia. I-Aquatech China igxile kwiimveliso kunye neenkonzo ngaphakathi kwetekhnoloji yamanzi su ...
IShaohong Elektroniki iTeknoloji Co., Ltd. Ngomhla woku-1 weSaziso seeholide
Ukuphendula kwizikhokelo zesizwe kunye nemigaqo-nkqubo, kunye nemeko yayo yemveliso, uShaohong Electronic Technology Co, Ltd. uthathe isigqibo sokuthatha iholide ukusuka kwi-5 / 1-5 / 5. Ngexesha leeholide, inkonzo yabathengi ye-e-commerce yasekhaya iya kuphendula kwimibuzo yabathengi kwi-intanethi ngexesha elifanelekileyo, ngaphakathi ...
Ngo-2021 iShaohong Spring Canton Fair iMiboniso ekwi-Intanethi iphele ngempumelelo
Ukuphela kwe-2020, xa abantu babelungiselela ukubhiyozela uMnyhadala weNtwasahlobo, i-coronavirus entsha yeza ngokuzolileyo, kwaye ukusasazeka okukhawulezayo kwentsholongwane kwabangela uloyiko kwilizwe liphela. Ngaphantsi kweemeko ezinzima, ilizwe likhawuleze lenza amanyathelo, kwaye iindawo ezahlukeneyo zaphendula kwi-ba ...
Indlela yokukhetha isixhobo esifanelekileyo sokuhambisa amanzi, isixhobo sokuhambisa amanzi i-shaohong lukhetho olufanelekileyo kuwe!
1 、 Ingena njani into yokusasaza amanzi kwikhaya ngalinye? Isixhobo samanzi yimveliso yasekhaya yokusombulula ingxaki yamanzi okusela. Ngenxa yokuphucula umgangatho wamanzi okusela kunye nomgangatho wobomi, uyathandwa ngabantu baseTshayina. Imbonakalo kwisixhobo amanzi yenza drinkin yethu ...
I-oveni yesitovu ngeglasi yesiFrentshi yeglasi "Si se xing ye" (Yindalo ukuthanda izinto ezilungileyo, mhlawumbi ukutya), ukuthanda ukutya kukuqhubeka okungapheliyo koluntu kwasekuqaleni.
I-oveni yesitovu ngeglasi yesiFrentshi yeglasi "Si se xing ye" (Yindalo ukuthanda izinto ezilungileyo, mhlawumbi ukutya), ukuthanda ukutya kukuqhubeka okungapheliyo koluntu kwasekuqaleni. Namhlanje, xa ubomi buya busanda, ukutya kwabantu, impahla yokunxiba nokutya kuye kwaguquka kakhulu. Iindidi zokutya zezi ...
Ukusukela nge-5 kaNovemba ukuya kwi-8 kaNovemba ngo-2019, i-25th "iMiboniso yoNyango lwaManzi yaMazwe ngaMazwe yase-Amsterdam" yabanjwa kwiNgqungquthela ye-RAI yeHlabathi kunye neZiko leMiboniso e-Amsterdam, eNetherlands. Uthotho lweemithombo yokusela, izinto zokucoca amanzi kunye namanzi ahlwahlwazayo ...
SHANGHAI AQUATECH CHINA JUNI 2nd-JUNI ...
Iindleko zezabelo Shaohong Electronic Technology Co., Ltd.